Isku-dayga Mideyntii Jabhadaha SNM iyo SSDF — Q…2AAD W/Q: Cali Cabdi Coomay | Cabays.com
Isku-dayga Mideyntii Jabhadaha SNM iyo SSDF — Q…2AAD W/Q: Cali Cabdi Coomay
Kulankii Weftigii SNM iyo Kornayl Qadaafi.
“ Waar magaciisa ayaan hoos loo dhigi Karin, waar intuu idin qaado ayuu saxaraha idin geyn karaa, ama safiirka Soomaaliya halkan u jooga ayuu farta idinka saari oo toos Muqdisho la idiinka dejin karaa. Miyeydaan ogeyn wixii Muusa Sadar ku dhacay ninkii mucaaridka reer Muritaaniya? Waxba kuma aha inuu safiirka Soomaaliya idiin dhiibo oo yidhaado, “Siyaad Barrow igala wareeg waa kuwii midnimada diidanaaye. Nimanyahow intaad meesha ka tegaysaan is banbaaniya, ninkana sidaasi looma hadli karo”. Markaa Liibiyaanki waxa ay yidhaaheen xaggaa iyo Itoobiya isla qabta labadiina jabhadood. Waxaana la soo raaciyey sarkaal sirdoon ah.
Markaasi ka dib ayey saraakiishii ka socday labada dawladood ee Itoobiya iyo Liibiya ee shirka u joogay inay labada dhinac isu soo jiidaan faraha kala baxeen. Sidaasi ayuu ku burburay wadaxaajoodkii u socday labada jabhadood. Dhammaan macluumaadkan iyo qormadii ka horraysay waxaad ka heli karaysaa buugga laga qoray madaxweynihii afraad ee Soomaalilaan Axmed Maxamed Maxamuud “ Siillaanyo” ee uu qoray xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan.